Izindaba - Zonke izitshalo, yonke indlela ezansi
Izitshalo eziningi ezintsha kuleli sonto, eziningi zazo ezingaba zintsha kuwe, ngakho-ke incazelo encane kungenzeka ibe ngumqondo omuhle:
Ama-apula ama-red lady anenyama enambitheka kamnandi kakhulu, ukunambitheka kungikhumbuza ama-apula avuthiwe aphelele owake wawadla ngesinono nje sesiraphu ye-maple.
Ama-apula kaFuji, abuye abizwe nangokuthi ama-apula abomvu, angama-aphula ayindilinga, abomvu okwegolide abomvu. Zimnandi nje kune-aphula lentokazi ebomvu, ezinodonga oluncanyana. Sithanda lokhu ngejamu nendawo yokubhaka.
Sikhule ama-apula aseGala ngesicelo esiphikelelayo sabangenisi abavela emazweni aphesheya. Lezi yizinhlobonhlobo zama-apula abukeka afana ncamashi nokukhanya kwamalambu alambu azungezile, angenakho okungeziwe okungeziwe, kepha kunambitheka okuningi. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukwenza izitsha zesaladi zaseCaribbean, ingxube enamakha yomsedari we-apula, upelepele, u-anyanisi nogalikhi, osetshenziselwa ukunambitha konke kusuka elayisi nobhontshisi, enyameni, noma emifino.
Ngemuva kokuhlunga kuwo wonke u-anyanisi wethu ogciniwe, futhi sinamacala ambalwa ka-anyanisi oswidi abancane abancane, abalingana noparele anyanisi. Lezi zizofakwa kahle kuma-skewers ama-kabobs agwetshiwe, ziphonswe ziphelele zibe yizitshulu, noma zivele zigijinywe phansi njengabo bonke abalandeli bethu anyanisi.
Lokho ukuphela kwezitshalo 'ezixakile' okwamanje. Sisenenqwaba kagalikhi ojwayelekile, ujinja, ama-apula amasha, no-anyanisi uma lokho kuyintandokazi yakho, zizwe ukhululekile ukuza uzobheka izithombe zethu zepulazi kuwebhusayithi yethu, bese ulandela isixhumanisi esingezansi www.primeagr.com. [izithombe zasepulazini zifakwa lapha]
Inothi lokugcina, kudingeka sikhethe futhi sipakishe kusenesikhathi ezinsukwini ngangokunokwenzeka ukuqinisekisa ukuthi imifino yakho ingena ngaphandle kwenkundla entsha yenhlabathi ukuze igcine ikhwalithi enhle. Kulabo kini abathanda ukubeka ama-oda wangaphambilini, ningasisiza ngokuthola ama-oda enu ngaphambi kwesikhathi kunokujwayelekile, ngakho-ke siyazi ukuthi yini okudingeka sibe nayo. Siyazithanda izinyoni zakuqala!
Siyabonga njengenjwayelo ngebhizinisi lakho, futhi ube neviki elihle!